IINGCAMANGO EZINGAMA-21 ZOMHLOBISO WOMTSHATO WASEBUSIKA UYA KUFUNA UKUKOPA - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Iindlela ezingama-21 zothando zokuHombisa uMtshato wakho woBusika
Iindlela ezingama-21 zothando zokuHombisa uMtshato wakho woBusika
'Lixesha leempazamo zomtshato kunye neetreyini zerindeer.
Ukuzihlaziya ngomlilo, ukukhenkceza emkhenkceni kunye nokuhamba ngokusondeleyo emva kwekhephu lokuqala-ubusika buzaliswe ngamaxesha angalibalekiyo, kwaye umtshato wasebusika we-Wondland sisizathu esifanelekileyo sokufaka izinto ezimbalwa eziphuphayo, ezothando kumnyhadala wakho nakwimisitho yokwamkela. Hlanganisa amasebe ahlala eluhlaza kunye neepine kwi-centerpieces yakho kunye neendawo zokubeka indawo ye-rustic affair, okanye ukhethe i-chandeliers ezintle kunye namakhandlela ukukhanya okukhangayo. Nazi izinto ezimbalwa esizithandayo zemihlobiso yomtshato wasebusika yomnyhadala ngexesha leenyanga ezibandayo.
1. Amanqina akhanyisiweyo
UEmily Wren Photography
Umtya izibane zentengiso ejikeleze imilenze ephantsi, ejijekileyo ukongeza ukukhanya kobusika kwindalo.
Isuka: Umtshato weKrisimesi-owenziwe ngomtshato e-Aldie Mansion eDoylestown, ePennsylvania
2. Igumbi elinombono
U-Erin Nicastro Ukufota
Umhlobiso wakho womtshato wasebusika akufuneki uhlale endlwini. Ukubonelela ngeendwendwe zakho ngombono wesimangaliso sasebusika ngemithi ekhanyayo ngaphandle kweefestile zakho zokwamkela.
Isuka: Umtshato weBallroom Wasebusika kwindawo yokuHlala kwiGadi yaseFlorentine eMlambo iVale, eNew Jersey
3. I-Snowy Gazebo
Iifilimu zoMtshato zikaEmily Joanne kunye neefoto
Izityebi eziluhlaza eziluhlaza kunye nezinto ezininzi ziya kongeza umbala kunye nokufudumala kumtshato wakho wobusika obumangalisayo.
Isuka: Umtshato wo-Eva onguNyaka oMtsha waseRustic eSanctuary kuMlambo eRuidoso, eNew Mexico
4. Umsitho wekhandlela
UKate Preftakes Ukufota
Amakhandlela athe saa
Isuka: Umtshato waseRustic, weChic ebusika kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo eWilton, eNew Hampshire
5. Izithsaba zomtshato
USarah Pudlo kunye noFoto
Hombisa umsitho wakho kunye nendawo yolwamkelo ngemixholo echumileyo eyenziwe ngemidiliya etshintshayo kunye ne-wisteria enombala wekhrimu ukuze uthinte into yakho yasebusika.
Isuka: Umtshato weVintage we-DIY eLayibrari kaRhulumente eProvidence eProvidence, eRhode Island
6. IiToppers zamaXesha athile
Ifoto kaSteve Stanton
UKUYA ipere yegolide kunye neepalali ezibekwe ngononophelo ziluswiti, ukongeza ubusika kwikhekhe elimhlophe lebhotela. Yikhonze ngaphezulu kwe indawo yokuma ikhekhe yokucheba iinkuni ukugqiba ukuseta.
Isuka: Umtshato weGolide wasebusika eTrappers Cabin eBeverver Creek, eColorado
7. I-Peppermint Twist
Awukho umtshato wasebusika ogqityiweyo ngaphandle kokuphathwa kwepepermermint. Beka iilekese phezu kweesetingi zakho uze uzisongele kwimixokelelwane yepine ukuze umangaliswe ziholide.
8. Umda weeKhandlela
Endaweni yokuhombisa indawo yakho eneentyatyambo, zama ukunika indawo efudumeleyo kwaye ememe kumsitho wakho womtshato wasebusika.
Isuka: Umtshato waseRoma oPhefumlelweyo, ophefumlelweyo wasebusika eDark's Thumb Ranch eTabernash, eColorado
9. Ubuhle kwiiRafters
Ukuba uthi 'ndenza' kwindawo erustic enjenge barn okanye ikhabhathi, gqamisa indawo eluhlaza kunye neekhandlela ezintle. Izinto ezichaseneyo ziya kongeza i-eclectic, imvakalelo yokuthandana kuseto.
10. Ingxelo yeentyatyambo
Imitshato yasebusika ihlala iziva isesikweni ngakumbi. Ngaba ufuna izixhobo zakho zangaphakathi zijike iintloko? Yiya ngaphandle kwaye ubeke izimbali ezimile okweedome kwiivazi ezinde kwiitafile zakho zokwamkela.
Iintyatyambo: IHydrangeas, iiroses kunye nohlaza
Isuka: Umtshato oSesikweni, woMtshato wasebusika eWillard InterContinental Hotel eWashington, DC
11. Ibha yetshokholethi eshushu
Ulibale ibha ye-ayisikrimu (okanye yongeza kuyo!) -Iindwendwe zakho ziya kuthanda ukukhetha okufudumeleyo emva kwesidlo sangokuhlwa. Cwangcisa ibha yetshokholethi eshushu ngemarshmallows, amacephe kamnandi weelekese kunye nezinto ezongezelelekileyo zeetshokholethi ezigcina iindwendwe zakho zicocekile ubusuku bonke.
Isuka: Umtshato waseRustic, oMtsalane kwiTyhuthi yeRin yaseTabernash, eColorado
12. Lifakwe kwiGolide
lulongezo oluhle kumalungiselelo akho eentyatyambo eluhlaza kunye nelinen yesanti.
Isuka: Umtshato oGlam, oMtsalane e-Union Hill Inn eSonora, California
13. Ubuhle obuhlala buhlaza
Faka iifrigi ezihlala ziluhlaza endaweni yakho kuseto lwendawo encinci yokuthungwa kwexesha lonyaka kunye ne-whiff efihlakeleyo yomntu wonke omthandayo, ipineyini.
14. Iipayini zePine kunye namaqunube
Yongeza iipine kunye neentlobo ngeentlobo zamaqunube ukuzisa iziko lakho eliphantsi ebomini-nokuba kubunzulu bobusika.
Iintyatyambo: Iiroses, iipinecones, oomama, isilivere brunia kunye nesoloko iluhlaza
Isuka: Umtshato weNtaba yaseBusika eWild Basin Lodge eAllenspark, eColorado
Imitshato kaJennifer Lindberg
Nika umxube weemilo kunye noburhabaxa kwindawo yakho esembindini. Ukuba usebenza kunye neetafile ezinde, ezibandakanya izidlo, zibandakanya iintyatyambo ezahlukeneyo (ezinjengeeroses kunye nee-tulips) ezahluka kwisitayile kodwa ziyahambelana.
Isuka: Umtshato waseRustic wase-Rustic e-Argyle eSan Antonio, eTexas
16. Dessert Enesaphetha
Phezulu kwikhekhe lakho lomtshato elimhlophe ngesaphetha esikhulu esiluhlaza esona sipho sikhulu seholide.
17. Umsitho wokuCoca
Ukuphosa yindlela efanelekileyo yokugcina iindwendwe zomtshato zasebusika zifudumele, kodwa zinokubonisa umboniso. Iingubo ezilukiweyo Ukutyhilwa ngaphezulu kwesihlalo somthi kuya kuphucula nawuphi na umsitho we-rustic.
Isuka: Umtshato waseRustic wasebusika eWhiteface Lodge eLake Placid, eNew York
Izigcawu zefestive yindlela elula yokuhombisa indawo yakho yomthendeleko, nokuba ubeka phantsi okanye ubaphakamise usebenzisa amagwegwe abelusi .
Isuka: Umtshato oBalaseleyo, weHolide-eMdeni eBlack Dolphin Inn eNew Smyrna Beach, eFlorida
19. Amakhadi okuHanjiswa ngomxholo
Umntu + uKillian Photography
Vumela indawo yakho yokuhlala ibonise umsebenzi ophindwe kabini ngokuqinisekisa ukuba intle (kunye nexesha lonyaka) ngokwaneleyo ukuba iphindwe kabini njengokuhombisa. Siyayithanda inkangeleko ye- Amakhadi okuhambisa ubusika iqhotyoshelwe kwiipines.
Isuka: Umtshato wasebusika weVintage kwiihotele ezine zamaxesha eBoston, eMassachusett
20. Izandi zekhephu
UCindy Lee Photography
Zininzi iindlela zeklasi zokubandakanya imixokelelwane yekhephu kumtshato wakho wasebusika, kodwa kuhlala ukubheja okukhuselekileyo.
Isuka: Umtshato oMnandi wasebusika kwiiKnights zaseColumbus Hall kwiNdlu Springs, eMissouri
21. Amasebe aBare
IJordani Brian Imifanekiso
Ngubani othi amasebe angenanto awahle? I-Nodi eya kubume bemo yasebusika ene-strung enezinto zokuhombisa ezinjenge-tinsel okanye.
Ukusuka: Umtshato wasebusika ophefumlelweyo wobugcisa obu-Art-Deco kwiTye Terrace nguJohn Henry's eHamilton, eNew Jersey
UParker Butler ufake isandla ekunikeni ingxelo yeli nqaku.
Isinxibo somtshato elwandle kubafazi
ukutyibilika kwezicwangciso zesango
Umama wezinto zokuhombisa